ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်နဲ့လုပ်ပြီး သုက်ရည်ပေတဲ့ လက်နဲ့မှ ကလေးကို သွားလုပ်တယ်ပေါ့… ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမှပြော – MEDIALANN
ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်နဲ့လုပ်ပြီး သုက်ရည်ပေတဲ့ လက်နဲ့မှ ကလေးကို သွားလုပ်တယ်ပေါ့… ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ပြီးမှပြော
ကိုယ့်ဟာကိုယ် လက်နဲ့လုပ်ပြီး သုက်ရည်ပေတဲ့ လက်နဲ့မှ ကလေးကို သွားလုပ်တယ် လို့ ကောက်ချက်ချတယ် ဆိုတော့ ယူက ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Hand gel ပို့စ်ကို ဖတ်ဖူးနေတယ်ပေါ့ ?
Feeling proud ပါနော်
အဲ့လိုသာဆို ကိုအောင်ကြီးလည်း တော်တော်ကိုမှ အေးအေးဆေးဆေး နိုင်တဲ့လူလို့ ပြောရမယ်။ ကျောင်းထဲလည်း ဝင်ရဦးမယ်၊ ခုမှ မြင်ဖူးတဲ့ ကလေးကလည်း အသာတကြည် လိုက်သွားနိုင်လောက်တဲ့အထိ မျက်နှာမြင် ကလေးချစ်ပါစေ ရုပ်နဲ့လည်း ပြည့်စုံရဦးမယ် (တကယ်ပါ၊ ကျနော်ဆို ခုမှ တွေ့တဲ့ ကလေးတွေကို ခေါ်သွားဖို့ မပြောနဲ့၊ နှုတ်ဆက်ရင်တောင် ဘယ်ကလေးမှ ပြန်နှုတ်ဆက်ဖို့ နေနေသာသာ အဖက်တောင် လှည့်မလုပ်ကြဘူး ?)၊ သူ့ဟာသူလည်း အရင်အာသာဖြေရမယ်၊ ပြီးလည်း ပြီးသွားရမယ်၊ သုက်ရည်ပေနေတဲ့ လက်ကို ဘာနဲ့မှ မသုတ်နိုင်လောက်တဲ့အထိ အရှိန်တက်နေရမယ်၊ ပြီးမှ ကျူးလွန်ရမယ်။
အမလေး တွေးကြည့်ရင် ဒီအနေအထားက မအေးအေးဝင်း စီစဉ်တာထက်တောင် ပြည့်စုံနေတော့တာပါလား။
အမေရိကန်မှာ လုပ်ထားတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခုအရ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေရဲ့ ၉၃% ဟာ ကလေးနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့သူတွေက ကျူးလွန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန် ၇% ကလည်း ရက်စက်စွာ ဖမ်းဆီးပြီးမှ အတင်းပြုလုပ်ကြတာ များတယ်။ အချက်အလက်တွေ ခဏဘေးချိတ်တောင် ဘယ်ကလေးမှ မျက်နှာစိမ်းနောက်ကို အသာတကြည် မလိုက်ဘူး။ မယုံ ခေါ်ကြည့်။ ကလေးရဲ့ သဘာဝကိုက ဒီလိုပဲ။ ခုမှ အလုပ်ဝင်တဲ့ ယာဉ်မောင်းက ခုလို ကလေးကို ဘာပြင်ပထိခိုက်ဒဏ်ရာမှ ကြီးကြီးမားမား မရှိဘဲ (ဆိုလိုတာက အတင်းချုပ်ပြီး လုပ်ခဲ့တာမျိုး မရှိဘဲ) ဒီလိုပြုကျင့်သွားပါတယ်၊ နေရာကလည်း လူတွေအများကြီး ရှိနေတဲ့ ကျောင်းထဲမှာပါ ဆိုကတည်းက တခုခု လွဲနေပြီလို့ ခံစားရပါတယ်။
ခု ရှင်းလင်းချက်တွေကို မကျေနပ်သေးပါဘူး၊ တရားမျှတမှု လိုချင်တယ် လို့ပဲ ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
Source – Phio Thiha FB
ကိုယျ့ဟာကိုယျ လကျနဲ့လုပျပွီး သုကျရညျပတေဲ့ လကျနဲ့မှ ကလေးကို သှားလုပျတယျ လို့ ကောကျခကျြခတြယျ ဆိုတော့ ယူက ကိုယျရေးထားတဲ့ Hand gel ပို့ဈကို ဖတျဖူးနတေယျပေါ့ ?
Feeling proud ပါနျော
အဲ့လိုသာဆို ကိုအောငျကွီးလညျး တျောတျောကိုမှ အေးအေးဆေးဆေး နိုငျတဲ့လူလို့ ပွောရမယျ။ ကြောငျးထဲလညျး ဝငျရဦးမယျ၊ ခုမှ မွငျဖူးတဲ့ ကလေးကလညျး အသာတကွညျ လိုကျသှားနိုငျလောကျတဲ့အထိ မကျြနှာမွငျ ကလေးခဈြပါစေ ရုပျနဲ့လညျး ပွညျ့စုံရဦးမယျ (တကယျပါ၊ ကနြျောဆို ခုမှ တှတေဲ့ ကလေးတှကေို ချေါသှားဖို့ မပွောနဲ့၊ နှုတျဆကျရငျတောငျ ဘယျကလေးမှ ပွနျနှုတျဆကျဖို့ နနေသောသာ အဖကျတောငျ လှညျ့မလုပျကွဘူး ?)၊ သူ့ဟာသူလညျး အရငျအာသာဖွရေမယျ၊ ပွီးလညျး ပွီးသှားရမယျ၊ သုကျရညျပနေတေဲ့ လကျကို ဘာနဲ့မှ မသုတျနိုငျလောကျတဲ့အထိ အရှိနျတကျနရေမယျ၊ ပွီးမှ ကြူးလှနျရမယျ။
အမလေး တှေးကွညျ့ရငျ ဒီအနအေထားက မအေးအေးဝငျး စီစဉျတာထကျတောငျ ပွညျ့စုံနတေော့တာပါလား။
အမရေိကနျမှာ လုပျထားတဲ့ စဈတမျးတဈခုအရ သကျငယျမုဒိမျးမှုတှရေဲ့ ၉၃% ဟာ ကလေးနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့သူတှကေ ကြူးလှနျတာ ဖွဈပါတယျ။ ကနျြ ၇% ကလညျး ရကျစကျစှာ ဖမျးဆီးပွီးမှ အတငျးပွုလုပျကွတာ မြားတယျ။ အခကျြအလကျတှေ ခဏဘေးခြိတျတောငျ ဘယျကလေးမှ မကျြနှာစိမျးနောကျကို အသာတကွညျ မလိုကျဘူး။ မယုံ ချေါကွညျ့။ ကလေးရဲ့ သဘာဝကိုက ဒီလိုပဲ။ ခုမှ အလုပျဝငျတဲ့ ယာဉျမောငျးက ခုလို ကလေးကို ဘာပွငျပထိခိုကျဒဏျရာမှ ကွီးကွီးမားမား မရှိဘဲ (ဆိုလိုတာက အတငျးခြုပျပွီး လုပျခဲ့တာမြိုး မရှိဘဲ) ဒီလိုပွုကငျြ့သှားပါတယျ၊ နရောကလညျး လူတှအေမြားကွီး ရှိနတေဲ့ ကြောငျးထဲမှာပါ ဆိုကတညျးက တခုခု လှဲနပွေီလို့ ခံစားရပါတယျ။
ခု ရှငျးလငျးခကျြတှကေို မကနြေပျသေးပါဘူး၊ တရားမြှတမှု လိုခငျြတယျ လို့ပဲ ထပျပွောခငျြပါတယျ။
နားပေါက်ဖောက်တာတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ရင်း အသဲတွေပါယားတယ်